Mid ka mid ah Kooxaha waa weyn ee horyaalka Premier League oo doonaysa inay la wareegto Dries Mertens – Gool FM
(London) 11 Abril 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa lagu soo warramayaa inay xiiseynayso saxiixa xiddiga lagu magacaabo Dries Mertens, waxayna rabta inay kala soo wareegto Naadiga Napoli, sida lagu sheegay warbixin laga soo saaray gudaha Talyaaniga.
Xiddiga reer Belguim ayaa qarka u saaran inuu ka tago kooxda Napoli dhammaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo qandaraaskiisa uu dhacayo dhammaadka bisha June.
Laacibka ayaa dhaliyay 121 gool 309 kulan uu u saftay tan iyo markii uu u dhaqaaqay Talyaaniga sanadkii 2013-kii, gooldhaliyahan ayaana noqon doona xiddig aad lagu dagalamo saxiixa suuqa kala iibsiga, maadaama uu bandhig cajiib ah ka sameeyay Kooxda Napoli.
Kooxda Napoli ayaa ku jahwareeri doonta haddii uu ka tago gooldhaliyahan cajiibka ah, maadaama kooxda aysan haysan xiddig la mid ah Dries Mertens.
32-sano jirka ayaa kooxda Napoli kaga soo biiray naadiga lagu magacaabo PSV, sanadkii 2013-kii, wixii xilligaas ka dambeeyay wuxuu noqday mid dheeman ka ah garoonka San Paolo, isagoo kooxda sanadkan ka caawiyay inay la dagaalanto kooxaha waa weyn, sidoo kale ku jirto booska lixaad ee kala sarreynta horyaalka Serie A.
Sida laga soo xigtay warsidaha Il Mattino Kooxda Arsenal ayaa isha ku haysa xaaladda xiddigan Dries Mertens xilli kooxda reer Spain ee Atletico Madrid ay damacsan tahay inay u dhaqaaqdo adeegga laacibkan.
Kooxda Real Madrid oo qarka u saaran inay heshiis cusub ka saxiixato mid ka mid ah xiddigaheeda